Umhambisi we-Cree Umsasazi wezinto ze-elektroniki ze-Cree-Ocean-Components.com
- I-Cree ibangela ukuguqulwa kwe-LED ukukhanyisa kwaye yenza ubuchwepheshe bokukhanyisa ukukhanya kwamandla okungapheliyo ngokusebenzisa ukukhanya kwe-LED esebenzayo, ukukhanya kwemvelo. I-Cree yokuqala yiletha i-LED eluhlaza kwiimarike ngo-1989, kwaye namhlanje ii-Cree ze-XLamp® ii-LED ziye zagqithisa imilinganiselo yoshishino ekukhanyeni nasekusebenzeni kakuhle. Ewe, ii-LED ze-XLamp zazingumbane wokuqala wokukhanyisa ii-LED-ii-LED ezikhanyayo ngokwaneleyo ukuba zisetyenziswe kwizixhobo eziqhelekileyo zokukhanyisa, ezifana nezibane zedesiki, izibane zokubeka kunye nezibane zesitalato. Ukongezelela, i-Cree yomgca ophezulu we-LED ephezulu-khonkco ikwazisa amanqanaba omsebenzi omtsha ukuya kubonakaliso bevidiyo zangaphandle kunye nokukhanyisa ukukhanya.
Amandla eCree kunye neCandelo le-RF ngoku liyaziwa ngokuthi yi-Wolfspeed, Inkampani yeCree. I-Wolfspeed ikhupha amandla kunye neenkqubo ezingenazintambo ezivela kwimida ye-silicon ngokukhokelela ukutsha kunye nokuthengiswa kweenkqubo eziza kulandela ngokusekelwe kwi-silicon carbide ne-nitride ye-gallium.